Keke rezhizha nechingwa chakachekwa | Kicheni Mapepa
Keke rezhizha nechingwa chakachekwa
Tony Torres | | Spanish Cuisine, Nyore Mapepa
Nekusvika kwekushisa kwakanyanya, iwe unoda kudya neimwe nzira, nezvigadzirwa nyowani uye zviri nyore kugaya senge ino inonaka keke yezhizha yechingwa chakachekwa. Iyi ndiyo nzira yechinyakare kubva kuAndalusian chikafu, kunyanya kubva kuguta guru, Seville. Kunyangwe hwaro hwakatosiyana sezvo iyo yekutanga marefisheni ari akazara miriwo, dhishi iri rinobvuma sarudzo zhinji kuti rigadzirise zvakanyanya kune zvido zveumwe neumwe.
Mune ino kesi, ini ndawedzera mapuroteni kudhishi kuti riite rakazara uye riishande seimwe chete ndiro. Asi sekutaura kwangu, nguva dzose unogona kuzvigadzirisa nekuwedzera kana kubvisa zvinoshandiswa zvinoenderana nezvaunoda. Iyo keke yemuriwo yechingwa chakachekwa ichakuburitsa kubva kunopfuura kamwe kukurumidza uye uchanyatsoigadzirira nguva dzose mukati megore uyezve, pamwe nekupisa kwezhizha. Pasina imwezve ado, ngatione maitiro ekugadzirira iyi inonaka inotonhora keke.
munyori: Tony Torres
Imba yekicheni: Spanish
Recipe mhando: chisvusvuro
Nguva yekugadzirira: 30 M
Kubika nguva: 20 M
Nguva yakazara: 50 M
Chichena, chisina kutsemurwa chingwa
2 lettuce buds
1 guru nyanya
Yakatemwa turkey zamu
Yakatemwa havarti chizi
2 magaba etoni yakasikwa
Chekutanga tava kuzoisa pani nemvura pamoto kuti tibike mazai maviri.
Zvichakadaro, tiri kuenda kunogadzirira zvese zvinoshandiswa pakuzadza keke.
Isu tinocheka lettuce buds uye toshamba mushe, tinochengetera mudrainer kubvisa ese mvura.
Iye zvino, tinosuka tomato zvakanaka uye tinocheka kuita zvidimbu zvakatetepa.
Isu tinodurura makani maviri e tuna uye chengetedza.
Kana mazai acho angobikwa uye achidziya, tinoaabvarura tobva tachekacheka kuita zvidimbu zvisina gobvu.
Kupedzisa nezvakagadzirwa, tinosvuura karoti uye tocheka neakafanana peeler kuti tiwane zvidimbu zvakatetepa.
Ino ndiyo nguva yekuunganidza keke, kune izvi isu tinoda keke-yerudzi rwevhu iyo yatinozoenderana nealuminium pepi.
Kutanga tinoisa zvimedu zvechingwa kusvikira pasi pakafukidzwa.
Isu tinoisa rukoko rwe mayonnaise kuravira uye nekupararira zvakanaka.
Chidimbu chekutanga chichava icho chiri pamusoro, saka isu tichatanga kuisa base lettuce muJulienne.
Ipapo isu tinoisa iyo yakatemwa madomasi uye karoti zvidimbu.
Zvino, isu tinoisa imwe nhete yechingwa chakachekwa, tichimanikidza nemaoko edu kuomesa keke.
Isu tinoparadzira mayonesiise zvakare uye ikozvino tinoisa hwaro hwehaarti chizi, imwe yeturu turuva uye hafu yekotapeya yakatemwa kuita matete matete.
Isu tinoisa dura rechingwa chakachekwa zvakare ndokuparadzira mayonnaise.
Muchikamu chekupedzisira, tichaisa zvimedu zvezai zvakabikwa uye tuna yakatsetseka.
Isu tinoisa dura rekupedzisira rechingwa chakachekwa uye nekuvhara nealuminium pepi.
Isu tinoisa keke mufiriji uye tinoisa chidhinha pamusoro kuitira kuti igadzike zvakanaka.
Rega kupora kweinenge awa.
Panguva yekushandira, tinobvisa aruminiyamu pepa kubva kumusoro uye toisa sosi kwarinenge richishandirwa.
Isu tinoshandura muforoma nokungwarira uye kubvisa iyo yakasara yealuminium pepa.
Kupedzisa, tinoparadzira nemayonesi uye nekushongedza kuravira, nezvidimbu zveavocado, tomato, lettuce kana chero chaunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Mapepa ePasi » Spanish Cuisine » Keke rezhizha nechingwa chakachekwa
Gamuchira mabikirwo mune yangu email
Yogurt keke ine yakagadzirirwa sitrawberry muto
Oatmeal uye mazambiringa akaomeswa